Toetra mampiavaka, fahombiazana ary fiasan'ny fanafanana geothermal | Fanavaozana maintso
Portillo Alemanina | | Angovo geothermal
Rehefa tonga ny ririnina mangatsiaka dia mila manafana ny tranontsika isika mba hahazoantsika aina kokoa. Amin'izay isika manana fisalasalana momba ny fiakaran'ny tany, ny fandotoana, sns. Amin'ny alàlan'ny fampiasana angovo mahazatra amin'ny fanafanana. Na izany aza, afaka miantehitra amin'ny angovo azo havaozina ampiasaina amin'ny fanafanana trano isika. Momba ny fanafanana hafanana.
Ny angovo geothermal dia mampiasa ny hafanana avy amin'ny Tany hanafanana rano sy hampitombo ny hafanana. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ny zava-drehetra momba ny fanafanana geothermal isika. Noho izany, raha te hahafantatra ny momba an'io angovo sy ny fomba fiasa io ianao dia tohizo ny famakiana 🙂
1 Inona no atao hoe angovo geothermal?
2 Ahoana no ampiasana ny angovo geothermal?
3 Fandidiana fanafanana geothermal
4 Fampiharana angovo
5 Izay tokony ho ao an-tsaina
Inona no atao hoe angovo geothermal?
Ny zavatra voalohany dia ny fanaovana famerenana fohy momba ny atao hoe angovo geothermal. Azonao atao ny milaza fa io dia angovo voatahiry amin'ny endrika hafanana ambonin'ny tany. dia mahafaoka ny hafanana rehetra izay tehirizina amin'ny tany, rano ambanin'ny tany ary vato, tsy jerena ny mari-pana, ny halaliny na ny niandohany.
Misaotra an'izany fa fantatsika fa amin'ny ambaratonga lehibe kokoa na kely kokoa dia manana angovo voatahiry ambanin'ny tany isika ary afaka sy manararaotra izany. Miankina amin'ny maripana misy azy dia azontsika ampiasaina amin'ny tanjona roa izy io. Ny voalohany dia ny fanomezana hafanana (rano mafana ara-pahasalamana, fanamafisam-peo na fanafanana geothermal). Etsy ankilany, manana ny herin'ny herinaratra avy amin'ny hafanana isika.
Angovo geothermal miaraka amin'ny entalpi ambany dia ampiasaina amin'ny famokarana hafanana sy hafanana. Io no mahaliana antsika ny fahalalana.
Ahoana no ampiasana ny angovo geothermal?
Nisy ny fanadihadiana natao izay mamintina fa amin'ny halalin'ny 15-20 metatra eo ho eo, lasa marin-toerana ny maripana mandritra ny taona. Na dia miovaova aza ny mari-pana any ivelany, dia hilamina kosa ny halaliny. Ambony degre vitsy kokoa noho ny salanisa isan-taona izy, eo amin'ny 15-16 degre.
Raha midina mihoatra ny 20 metatra isika dia mahita fa miakatra ny mari-pana amin'ny gradient 3 degre isaky ny metatra zato. Izany dia vokatry ny grady grady geothermal malaza. Arakaraky ny halehiben'ny lalantsika no ifanatonanay kokoa amin'ny ivon'ny Tany ary lavitra ny angovo avy amin'ny masoandro.
Ny angovo rehetra ao anaty ny tany nomen'ny atin'ny tany, ny hazavan'ny masoandro ary ny ranon'orana dia azo ampiasaina amin'ny fifanakalozana azy ireo tsiranoka famindrana hafanana.
Mba hanararaotana an'ity angovo tsy mety ritra ity amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona dia mila fitaterana sy tsiranoka famindrana hafanana isika. Azonao atao koa ny manararaotra ny rano anaty ary manararaotra ny mari-pana.
Fandidiana fanafanana geothermal
Mba hampitomboana ny mari-pana amin'ny efitrano amin'ny andro ririnina dia mila fitaovana izay mahazaka ny angovo nalaina avy amin'ny sary mafana isika ary mamindra izany amin'ny fifantohana mangatsiaka. Ny ekipa mamela izany Izy io dia antsoina hoe paompy hafanana hafanana.
Amin'ny paompy hafanana, alaina avy amin'ny rivotra ivelany ny angovo ary afaka mamindra azy mankany anatiny. Ireo milina ireo amin'ny ankapobeny dia mihazakazaka tsara ary be mpampiasa amin'ny toe-javatra ivelany, raha ilaina (na dia mihena aza ny fahombiazany). Toy izany koa ny paompy hafanana aeroterma. Manana vokatra tsara izy ireo, saingy miankina amin'ny toetr'andro.
Ny paompy hafanana hafanana dia manome tombony tsy azo lavina noho ny paompy hafanana hafa. Ity ny maripana marin-tany amin'ny Tany. Tokony hotadidintsika fa raha maharitra ny mari-pana mandritra ny taona dia tsy hiankina amin'ny fepetra ivelany toy ny tranga hafa ny fahombiazana. Ny tombony dia ny mandray foana na manome ny angovo amin'ny hafanana mitovy.
Noho izany, azo lazaina izany ny paompy hafanana hafanan'ny rano-rano Izy io dia iray amin'ireo fitaovana fandefasana hafanana tsara indrindra eny an-tsena. Tsy hanana afa-tsy ny fanjifana ny paompy mivezivezy edl hafanana famindrana hafanana isika (ity ranoka ity dia rano miaraka amin'ny antifreeze) sy ny compressor.
Ny fitaovan'ny angovo geothermal dia mivoatra be tato ho ato ary lasa mifaninana amin'ny tsena. Azo lazaina fa mitovy amin'ny fitaovana hafa miaraka amin'ny kilasy A + sy A ++ efficiencies ho an'ny rafi-panafana izy ireo
Ny angovo geothermal dia mbola tsy be mpampiasa any an-trano. Amin'ny fanamafisana ny fananganana dia azo jerena ao anatin'ny drafitra fitsitsiana angovo. Anisan'ireo fampiharana ny herin'ny Tany hitantsika:
Rano mafana fanadiovana.
Tany mamelombelona. Na dia toa mifanipaka aza izy io, rehefa mafana kokoa ny any ivelany, dia azo avadika ilay tsingerina. Ny hafanana dia alaina avy ao anaty trano ary avoaka mankany amin'ny tany ambany. Rehefa mitranga izany dia mijanona ho toy ny rafitra mangatsiaka eo anelanelan'ny trano sy ny any ivelany ny fanafanana ambanin'ny tany.
Ny safidy tsara indrindra sy mahomby indrindra dia ny misafidy rafitra paompy hafanana miaraka amin'ny fanafanana hafanana. Mety amin'ny rano sy fametrahana mari-pana ambany izy io mba hahazoana fahombiazana lehibe indrindra. Raha manana fametrahana angovo azo avy amin'ny masoandro avy any an-trano koa isika, dia hahazo tahiry angovo ary hampihena be ny famoahana entona CO2 amin'ny atmosfera.
Ary ny angovo geothermal dia manana tombony maro toa ny:
Paompy hafanana ankehitriny miaraka amin'ny fahombiazana avo lenta. Rafitra fanamainana geothermal tena mahomby.
Angovo azo havaozina.
Ny famoahana CO2 ambany be noho ny solika hafa.
Angovo ho an'ny rehetra, eo ambanin'ny tongotsika.
Angovo mitohy, tsy toy ny masoandro sy rivotra.
Vidina fandidiana ambany.
Izay tokony ho ao an-tsaina
Alohan'ny hanatanterahana an'io karazana io ao an-tranontsika dia misy lafiny sasany tsy maintsy raisina. Ny zavatra voalohany dia ny fanatanterahana fanadihadiana azo atao ara-toekarena ho an'ilay tetikasa. Mety tsy manana angovo geothermal ianao amin'ny faritra misy anao hahomby. Raha lehibe ny toerana dia mety ilaina ny fandinihana geoteknika feno kokoa.
Tokony ho fantatrao izany ny vidiny voalohany amin'ity karazana fametrahana ity dia somary avo kokoa, indrindra raha misambotra angovo mitsangana izy io. Na eo aza izany, ny fe-potoana fandoavana ny vola dia eo anelanelan'ny 5 sy 7 taona.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka miditra amin'ny tontolon'ny fanamainana hafanana ianao ary mankafy ny tombony rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Angovo geothermal » Fanamainana geothermal
Jose Luis Alonso dia hoy izy:
Tena mahaliana ity rafitra ity ary tena nanazava tsara, arahaba tsara.
Valiny tamin'i Jose luis Alonso
Inona no ary manao ahoana ny maha-zava-dehibe ny ecomobility